ရင်ပူတာကို သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ? | OnDoctor
ရင်ပူတာကို သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်မလဲ?
ကျန်းမာစေသော အစားအစာကျန်းမာသော နေထိုင်မှုပုံစံအထွေထွေရောဂါများအကြောင်း
By OnDoctor Editor	 On Sep 7, 2020 Last updated Sep 7, 2020
ရင်ပူတယ်ဆိုတာ လေတက်မယ် (သို့မဟုတ်) ကြို့နည်းနည်းထိုးမယ်၊ ပြီးတော့ ရင်ဘတ်နဲ့ လည်ပင်းမှာ ပူစပ်ပူလောင် ခံစားရတာကို ခေါ်တာပါ။
ရင်ပူတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ၂ ချက်ရှိပါတယ်
ပထမအချက်က ချဉ်လွန်း၊ စပ်လွန်းတဲ့ အစားအစာတွေ စားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ အစာရေမျိုပြွန်က အစာအိမ်ထဲကို ဝင်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အဆို့ရှင် မလုံလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်များ ရောပြွန်းနေတဲ့ အရည်တွေက အစာရေမျိုပြွန်တစ်လျှောက် ပြန်ဆန်တက်လာလို့ ရင်ပူတာခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ပူတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ မသက်မသာနဲ့ ခံစားရတာ မအီမသာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ပူတဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာစေမဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သိရှိဖို့တော့ လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ပါ
အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ရင်ပူတာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်ခုက အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်များရောပြွန်းနေတဲ့ အရည်များ အစာရေမျိုပြွန်တစ်လျှောက်ကို ပြန်လည်ဆန်တက်လာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အလွန်အမင်းတင်းကျပ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဝမ်းဗိုက်နှင့် အစာအိမ်ကို ဖိအားပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အက်ဆစ်များကို ဆန်တက်ဖို့ ပိုမိုတွန်းအားပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပထမဆုံး လုပ်ရမယ့် အလုပ်က ခါးပတ်တွေ တင်းကျပ်လွန်းနေရင် ဖြေလျော့လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ပွပွချောင်ချောင် အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ပါ။
၂။ မတ်မတ်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ထိုင်နေစဉ် (သို့မဟုတ်) လဲလျောင်းနေစဉ်အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်အောင် နေပါ။ အကယ်၍ မတ်တပ်ရပ်နေပါကလည်း မတ်မတ်ရပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
အစာရေမျိုပြွန်ကနေ အစာအိမ်ထဲကို ဝင်တဲ့အဝင်၀မှာ အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်တွေကို အစာရေမျိုပြွန်ထဲကို မဝင်ရောက်စေရန် တားဆီးပေးတဲ့ ရှုံ့ကြွကြွက်သားလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်အောင်နေခြင်းဟာ အဲဒီရှုံ့ကြွက်သားလေးအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်မှုကို လျှော့နည်းစေပြီး အက်ဆစ်များ ပြန်လည်ဆန်တက်ခြင်းကို သက်သာအောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ပူတာလည်း သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ညအိပ်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းအောင် ပိုမြင့်အောင်လုပ်ပြီး အိပ်ပါ။
ညဘက် ရေပြင်ညီအတိုင်း အိပ်ခြင်းဟာ ရင်ပူတာကို ပိုပြီး ဆိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အထက်ပိုင်းကို မြင့်အောင်လုပ်ပြီး အိပ်ခြင်းဟာ ရင်ပူတာကို သက်သာစေပါတယ်။
အကယ်၍ ကုတင်ကို လိုသလိုထောင်မတ်လို့ရပါက ကုတင်ရဲ့ အထက်ပိုင်းကို လိုသလိုမြှင့်ပြီး အိပ်တာက သက်သာစေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကုတင်ကို လိုသလို ထောင်မတ်လို့ မရပါက wedge pillow လို့ခေါ်တဲ့ လျောစောက်ပါတဲ့ ခေါင်းဦးများကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၄။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ ရေနဲ့ရောပြီးသောက်ပါ။
ရင်ပူတဲ့ ပြဿနာကို မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို သုံးပြီး သက်သာအောင် ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ရေတစ်ဖန်ခွက်ထဲမှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ရောမွှေပြီး ဖြေးညင်းစွာ သောက်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အစာအိမ်ထဲက အက်ဆစ်တွေကို ဓါတ်ပျယ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၅။ ဂျင်းကို အသုံးပြုပါ။
ဂျင်းဟာ ရင်ပူတာကို ကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်ကြောင်း ယုံကြည် အသုံးပြုလာကြတာ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာရှိခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ ဂျင်းဟာ ပျို့အန်ချင်တာကို ကုသတဲ့နေရာမှာ အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်ပူတာကို ကုသတဲ့နေရာမှာလည်း အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်းကို ပါးပါးလှီးပြီး အကြော်အလှော်၊ ဟင်းချိုတွေမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းကို အခြောက်လှမ်းပြီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းမှာလည်း ထည့်သောက်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျင်းပါတဲ့ ဘီယာလိုဟာမျိုးတွေကိုတော့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ အရက်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အဖျော်ယမကာတွေက ရင်ပူတာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အဲဒီလိုပစ္စည်း အများစုဟာ တစ်ကယ့်ဂျင်းအစစ်ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လူကပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ အနံ့နဲ့ အရသာအတုတွေ ပါဝင်တတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
နွယ်ချိုဟာ ရင်ပူတာကို ကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ နွယ်ချိုဟာ အစာရေမျိုပြွန်တစ်လျှောက်ရှိ အကျိအချွဲအပေါ်ယံလွှာကို ထူလာစေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အက်ဆစ်ကြောင့် ထိခိုက်မှုဒဏ်ကို သက်သာစေပြီး ရင်ပူတာကို သက်သာစေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နွယ်ချိုတွေကို အလွန်အမင်း စားခြင်းဟာ သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ပိုတက်ဆီယမ် ပမာဏကိုကျဆင်းစေခြင်း၊ အချို့ ဆေးဝါးများရဲ့ အကျိုးအာနိသင်များကို လျှော့ကျစေခြင်း စတဲ့ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အတွက် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ နွယ်ချိုကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၇။ ပန်းသီးရှလကာရည်ကို သောက်သုံးပါ
ပန်းသီးရှလကာရည်ကိုလည်း အစာအိမ်ရဲ့ အက်ဆစ်တွေကို ဓါတ်ပျယ်စေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက် ရင်ပူတာကို သက်သာစေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ပန်းသီးရှလကာရည်ကို ရေနဲ့ ရောပြီး အစာစားပြီးချိန်မှာ သောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသီးရှလကာရည်ရဲ့ ရင်ပူတဲ့ဝေဒနာအပေါ် သက်ရောက်တဲ့ အကျိုး အာနိသင်တွေကို ပိုမို တိကျစွာသိနိုင်ဖို့ သုတေသနတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
၈။ ပီကေဝါးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနစာတမ်းများအရ အစာစားပြီးချိန်မှာ နာရီဝက်လောက် ပီကေဝါးပေးခြင်းဟာ ရင်ပူတဲ့ ပြဿနာကိုသက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပီကေဝါးခြင်းဟာ ပါးစပ်အတွင်းမှာ တံထွေးတွေကို ထွက်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ၄င် တံထွေးတွေကို မျိုချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အစာရေမျိုပြွန်ထဲက အက်ဆစ်ဓါတ်တွေကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပေးဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၉။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ ရင်ပူတာကိုလည်း ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့ လူသိနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာဆေးလိပ်လည်းသောက်တတ်၊ ရင်လည်းပူတယ်ဆိုရင်တော့ ရင်ပူတဲ့ဝေဒနာကို သက်သာစေဖို့ ဆေးလိပ်ကို လျှော့သောက်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
၁၀။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ရင်ပူတာကို သက်သာစေတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို အသုံးပြုပါ။
ဆေးဆိုင်များမှာအစာအိမ်အတွင်းအက်ဆစ်ဓါတ်ထွက်တာကို လျော့နည်းစေတဲ့ဆေးဝါးများ၊ အစာအိမ်အတွင်း အက်ဆစ်ဓါတ်များကို ဓါတ်ပျယ်စေတဲ့ဆေးဝါးများကို ဝယ်ယူသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အထက်ပါအချက်များအတိုင်း မိမိဘာသာ စမ်းသပ်ကုသပြီးပေမဲ့ သက်သာလာခြင်း မရှိဘဲ တစ်ပတ်ကို ၂ ခါ သို့မဟုတ် ၃ ခါထက်ပိုပြီး ရင်ပူတဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရခဲ့ပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရန်အကြံပြုလိုပါတယ်။
အားလုံး ရင်ပူကင်းဝေးပြီး ကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေ။
ဒေါက်တာ မိုး (ဆေး ၁)
သားသားမီးမီးတွေမှာ ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ချို့တဲ့နေရင် ……..